Baraf xoqan | February 2020
Ugu Weyn Ee Baraf xoqan
Greens siin dhadhan iyo caraf udgoonnada. Sidaas awgeed xawaashyada basbaaska leh ayaa miiskaaga ku jira maaha oo kaliya xagaaga, ha ahaato caajis si ay u diyaargaroobaan xilliga qaboobaha! Intaa waxaa dheer, goosashada dhirta dabiiciga ah ee cusub ee jiilaalka waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka tagto geedaha koray iyadoo la isticmaalayo Nitrate oo lacag kuugu keydineysa. Hab kasta oo goosashada waxaa ku jira isticmaalka labada nooc ee cagaaran iyo ururinta dhirta.
Waxaad barataa noocyada caanka ah iyo noocyada juniperka
Fasal canab "Kesha"
Cuntada dhirta leh hilibka duqadda ah. Cunto iyo adeegyo ikhtiyaar
Qodobo waxtar leh oo waxyeello u leh ambrosia
Palenka F1 yaanyo (Palengue F1) ayaa waxaa la jeexjeexay geedaha Holland. Sida laga soo xigtay talooyinka iyo dib u eegista badan oo ka soo bixiyay bannaanka u koray yaanyo, natiijada ugu fiican waxaa lagu muujiyey xaaladaha ciidda la xiray. Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa tamaandhooyinkan maqaalkeena. Waxaan kuugu soo bandhigi doonaa sharaxaad buuxda oo faahfaahsan oo kala duwan, waxaan ku ogaan doonaa sifooyinka iyo astaamaha beerashada. Read More
Tomato "Koenigsberg Golden": sharaxaad, faa'iidooyin, ka hortagga cudurrada
Ma rabtaa inaad la yaabto martida? Salad kaabaj casiir leh oo casaan leh oo leh raashin majones, adeega sawir
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Baraf xoqan 2020